कपिलवस्तुमा झाडापखालाको प्रकोप देखिएपछि ५० हजार क्लोरिन ट्याबलेट पठाइयो- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कपिलवस्तुमा झाडापखालाको प्रकोप देखिएपछि ५० हजार क्लोरिन ट्याबलेट पठाइयो
काठमाडौँ — कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा प्रकोपको रुपमा झाडापखला फैलिएपछि ईपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले आवश्यक औषधि तथा जनशक्ति पठाएको छ ।
ईडिसिडीका अनुसार ५० हजार क्लोरिन ट्याबलेट कृष्णनगर पुर्‍याइसकिएको छ । क्लोरिन पानी शुद्ध बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
महाशाखाका निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कपिलवस्तु महामारीमा आवश्यक सामाग्रीसहित चिकित्सक टोली तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि बिहीबार बिहानै परिचालित गरिएको बताए । उनले स्वास्थ्य आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रहरु ईडिसिडीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको जानकारी गराए ।
ईपिडिमियोलोजिस्ट डा. शशी कँडेल, कौशलचन्द्र सुवेदी र विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट डा. रविन गौतम प्रभावित स्थलमा गएका छन् । ‘हामी जिल्ला र प्रदेश सबैसँग समन्वय र सम्पर्कमा छौं र ईडिसिडी हाइ अलर्टमामा रहेको छ ,’ निर्देशक पौडेलले भने ।
असोज १८ देखि कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं ३, ४,७,८,९ र १२ मा झाडापखाला तथा बान्ताका बिरामीहरु देखिएका छन् । उनीहरुको हाल शिवराज अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । बिहीबार बिहान ९ बजसेम्म प्राप्त जानकारी अनुसार ३७० जना बिरामी भर्ना गरी उपचाररत रहेकोमा ३२ जनालाई तौलिहवा अस्पताल र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गरिएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ १८:३०